Ulusu olunamafutha? Lawula iziphumo zalo ebezingalindelekanga kwezi mveliso | Amadoda aQinisekileyo
Ukuchaneka, into ekufuneka uyigcinile ayisiyolusu olunamafutha - yiyo kukodwa kuyinto eqhelekileyo kwaye iluncedo ngeendlela ezininzi-Kodwa ezinye zeziphumo ebezingalindelekanga ezicaphukisayo.
Oku kulandelayo zezona mveliso zisebenzayo onokuzibandakanya kwinkqubo yakho yokuzilungisa yemihla ngemihla ukuthintela ukukhanya, iintloko ezimnyama kunye nabanye iingxaki ezinokuvela kulusu olunamafutha:
1 Ukukhanya kwe toner
2 Ulawulo lweoyile lokucoca ubuso
3 Isepha yamalahle yenziwe yasebenza
4 Ioyile yobuso
Ukukhanya kwe toner
Iikiehl, i-18 Euro
Ukuba ufuna ukunciphisa amafutha amaninzi kunye nokubila ebusweni kwi-swoop enye Nangaliphi na ixesha lomhla, qaphela iKiehl's Oil Eliminator Toner. Yenziwe ngohlobo lwesitshizi esilungeleleneyo (kulula njengokucinezela kunye nokuvumela inkungu ekhanyayo ukuba isebenze iyodwa), le mveliso ayilawuli kuphela ukukhanya kwesikhumba, ibuyisela ukubonakala kwayo kwasekuqaleni, kodwa ikwabonelela ngokuthandekayo imvakalelo yokutsha.
Ulawulo lweoyile lokucoca ubuso
Uluntu, € 26.95
Xa ulusu olunamafutha, cinga ngokuhlamba ubuso bakho rhoqo. Thintela ukoma okubangelwa kukuhlamba rhoqo (into enokwenzeka nokuba uvelisa i-sebum eninzi) ngokukhetha isicoci esincinci esenzelwe ngokukodwa ulusu olunamafutha, njengale ivela kuLuhlu lweLab. Yisebenzise kusasa, ngaphambi kokuba uqhubele phambili kuyo yonke imveliso kwizinto zakho zemihla ngemihla, kunye nasebusuku, ukuphelisa i-toxins kunye ne-sebum enokuthi iqokelele emini.
Isepha yamalahle yenziwe yasebenza
UTatomkhulu weSepha Co.
UVithamin ngethamsanqa, € 3.82
Amalahle asebenzayo athathwa njengesisombululo kwiingxaki zolusu ezingenakubalwa, kubandakanya ne-sebum egqithileyo. I-Grandpa Soap Co idibanisa amalahle kunye nezinye izinto ezinesikhumba-ezinje ngeoyile yepepermint okanye ioyile ye-organic hemp- kule ibha yesepha onokuyifaka eluswini lomzimba nasebusweni. Ukongeza kumdaka, amalahle asebenzayo angabulala neentsholongwane kunye neebhaktiriya, nto leyo eyenza umdla kubantu abathanda induna.
UMnu Porter, € 35
Ngelixa ukusebenzisa ioyile ngakumbi kubuso obunobuso be-sebum kunokubonakala ngathi bunemveliso, iioyile zobuso zinokuba ngabahlobo bakho ukuba unolusu olunamafutha. Ngokungafaniyo nezithambisi ezininzi (ezishiya ifilimu enokuvala ii-pores kwaye ibangele ukubila), iioyile kunye neeseramu zifunxwa ngokukhawuleza okukhulu. Ngele ndlela, ihambisa ulusu emanzini ngelixa ivumela ukuba iphefumle ngokufanelekileyo. Khumbula ukufaka ioyile yakho emva kokucoca kunye ne toner ukuze, xa ubumdaka bususwe, amandla okuthambisa makhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Gcina ulusu olunamafutha kunye nezi mveliso zisebenzayo
Izimvo zokuququzelela isidlo sangokuhlwa senkampani yakho kule Krismesi
Eyona isempilweni: iziqhamo kunye nemifuno smoothies